I-Magnesia ngumkhiqizo wokusebenzisa umuthi osetshenziswa cishe kuwo wonke amagatsha omuthi. It isetshenziswa njengendlela vasodilator futhi sedative.
Esikhathini esithile esidlule, lesi sidakamizwa sisetshenziswe ngokuqondile emisipha, kodwa sitholwe ukuthi singase sikwazi ukwehluleka ukuphefumula ezimweni ezinjalo. Ngaphezu kwalokho, ukwethulwa kwezidakamizwa zibe yisisindo kubagula futhi kubangela ukuphazamiseka okuningi. Ngakho-ke, i-magnesium ngokuvamile isetshenziswe ngaphakathi. Kukhona nesimo somuthi wokuphatha ngomlomo (ifomu le powder).
I-Magnesia isetshenziselwa ukufaka umphumela we-diuretic, ngaphezu kwalokho, ibuye ivuselele umswakama wodonga lwamasongo futhi, ngokufanele, iyancipha ukucindezela futhi ifake isimiso senhliziyo, isuse isimo esinjabulo.
Kumele ucatshangelwe uma usungula i-magnesia, okuyinto evame ukubhekana nokudakwa kwezidakamizwa, okuholela ekuguleni, ukunganaki nokuhluleka kokuphefumula. I-Magnesia iphathwa ngokucophelela ngokucophelela futhi kancane kancane. Ukwengeza kuzo zonke izakhiwo ezingenhla, lesi sidakamizwa sinomsebenzi wokumaketha ezingeni leselula, ngenxa yokuthi unomthelela ojulile emzimbeni.
I-Magnesia ngaphansi kwengcindezi isetshenziselwa ukuboshwa kwengcindezi ye-hypertensive noma ukunciphisa ukuphazamiseka kwamagciwane emasikhemikhali wezinga eliphansi. Ngenxa yazo zonke izakhiwo zayo ezinhle, i-magnesium isetshenziswe ngaphakathi ngenhloso yokulungisa ukucindezelwa kwegazi nokuvimbela ama- vasospasms asebekhulile. Kuhlanganiswa ekulungiseni i-magnesium kunomthelela ekuqaliseni izinqubo ze-metabolic in cardiomyocytes, kukhuthaza ukuqiniswa kwezingqamuzana zamangqamuzana wamangqamuzana enhliziyo, ngaleyo ndlela ziqinisa imisipha yenhliziyo futhi zikwazi ukumelana nokucindezeleka okukhulu.
I-magnesia yezidakamizwa iphumelela kakhulu lapho kwenzeka khona ukugubha kweziguli, tk. I-Magnesia ivimbela ukudluliselwa kwemizwa emithonjeni yezinzwa.
I-Magnesia ekukhuleni komzimba isetshenziswa ngokuyinhloko njenge-agent ye-tocolytic ne-antispasmodic. Emva kokuphathwa kwezidakamizwa, ukugeleza kwegazi embelethweni kwanda, izitsha ziyancipha futhi isiphithiphithi siphelile. I-Magnesia iyilungiselelo elihle ngesikhathi se-premenstrual syndrome. Akugcini nje kuphela ukuqeda ukuphahlazeka nobuhlungu, kodwa futhi kunomphumela ongabonakali wokuvukela. Ngakho, cishe zonke izimpawu ezinkulu ziqedwa.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi i-magnesium ingcono kakhulu ukuthi ingasetshenziswanga ngesikhathi sokukhulelwa, ngoba It has effects embryotoxic kanye teratogenic. Ngesikhathi sokuqeqeshwa kwangaphambi kwesikole, kungcono ukuthi abesifazane baqede ukufakwa kwamagnesia okungenani inyanga.
Umthamo wesidakamizwa unqunywe ukucabangela ubukhulu besifo, ubude benkambiso kanye nobudala besiguli. Kudingekile ukuba ngamunye akhethe umthamo wesidakamizwa futhi ugcine ukuphathwa kwawo kokuqala, Ukuphendula okwenziwe nge-allergenic kunokwenzeka.
Naphezu kwezindawo eziningi ezinhle, i-magnesia inemiphumela emibi eminingi:
- ukucindezeleka kwesikhungo sokuphefumula;
- ukusabela okweqile;
- i- hypotension ye-arterial ;
- ukusabela okunamandla okudambisa kakhulu, kuze kufike ekucindezelekeni;
Ngakho-ke, kunesiguli seziguli lapho i-magnesium iphikisana khona, noma injongo yayo ayinangqondo. Kumele futhi kukhunjulwe ukuthi i-magnesia ithuthukisa umphumela wezidakamizwa eziphakathi, ngakho-ke iziguli ezinokukhubazeka kwezinzwa kufanele zithathwe ngokucophelela. Ngaphezu kwalokho, ngokubambisana nezinye izidakamizwa ezinamandla, i-magnesium nayo yandisa umphumela, ngakho-ke kuyadingeka ukulawula ukuphathwa kwezidakamizwa ukuze kugweme ukucindezeleka.
Umsebenzi wemoto. Umthelela wayo empilweni yomuntu.
Indlela yokukhipha ama-hemorrhoids kuze kube phakade?
Klaus Barbie indaba Lyons hlaba
"Ascoril" analog ezishibhile. "Ascoril" (amaphilisi, isiraphu): imfundo manual, ukubuyekezwa, intengo
Umama Incazelo: kanjani ukuba babhale indaba
"Washiya isikhundla sakhe" - ke ... Incazelo umsuka